​झुप्रा र छाप्रामा खै त दसैँ ?
Tuesday,4Oct, 2016 12:17 PM
हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व बडादसै“ले सहर बजारलाई छपक्कै छोपेको छ । काठमाडांै उपत्यकासहित देशका प्रमुख ठूला सहरमा दसै“को रौनक छ, चहलपहल छ । हुनखानेहरू र शासनसत्तामा पुगेकाहरू आआफ्ना रहर पूरा गर्न सपिङको नाममा हजारौ“, लाखौ“ खर्च गरिरहेका छन् । तर, गाउ“घर सुनसान छन्, निम्न आय भएका श्रमजीवी मेहनतकश जनताका बस्ती र झुपडीमा दसै“ आएको छैन । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको सपना देखाएर हिजो गरिएका हिंसाले आहत जनता हुन् या वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले घरबार र परिवारजन गुमाएका भूकम्पपीडित जनता, पीडामै छन् । समृद्धिको सपना सा“चेर हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू, बलिदान गरेकाहरू, परिवर्तन पक्षधरहरू निराश छन् । बजारमा कालोबजारी गर्ने र कमिशनखोरहरूको जगजगी छ । सरकार हुनु नहुनुको पत्तो छैन । नियमन र नियन्त्रण छैन । लोकलाज जोगाउन जसरी पनि दसै“ मान्नैपर्ने सामाजिक दबाबमा लाखौ“ गरिब परिवार ऋणको भार थपिरहेका छन् । यति धेरै निराशा र कुण्ठाकाबीच नेपालीहरूका घरघरमा दसै“ भित्रिएको छ । त्यसैले गाउ“घरमा दसै“प्रति स्वभाविक उत्साह छैन । गरिबका झुपडीहरूमा उमंग छैन । भूकम्पपीडितका अस्थायी कटेरा र पालहरूमा मंगलधुन बज्न सकेको छैन ।
यस्तो अवस्था आयो किन ? यो अहम् सवाल छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने झन्डै आठ दशकदेखि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका नाममा ठूलठूला संघर्ष र त्यसपछि प्राप्त उपलब्धि भेटिन्छन् । जहानिया“ राणाविरुद्धको आन्दोलन, प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, पञ्चायतविरुद्ध बहुदलको आन्दोलन हु“दै राजतन्त्रविरुद्ध गणतन्त्रको आन्दोलनमा सफलता हासिल भएको छ । पछिल्लो आठ वर्षदेखि हामी गणतन्त्र नेपालका नागरिक भएका छौ“ । तर, राजनीतिमा हासिल गरेको यो आश्चर्यजनक उपलब्धी संस्थागत गर्दै जनजनका घरमा समृद्धि पु¥याउने काममा राजनीतिक नेतृत्व सधै“ चुकिरहेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि समृद्धि नै मुख्य कार्यभार बन्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू अझै सत्ताकै लुछाचु“डीमा देखिएका छन् । संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकार जसले जनतामा प्रशस्त सपनाको सञ्चार गराएको थियो, हाम्रै पालामा समृद्धि सम्भव छ भन्ने आशा जगाएको थियो, त्यस्तो सरकार ढालेर जनताका सपनालाई फेरि अनकण्टार सुरुङभित्र पसाउने काम भएको छ । सत्ताका भोका, लोभी दल र तिनका नेताहरूका कारण सधै“ झै“ यसपटक पनि नेपाली जनता ठगिन बाध्य भएका छन् । त्यसैले दसै“मा उत्साह छैन, उमंग छैन । सपना टुटेको जस्तो आभाष जनतालाई भइरहेको छ ।
जे नहुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छ । जे हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । यतिबेला सत्तासिन दलहरूले संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर आर्थिक समृद्धिको जग बसाउने काममा ध्यान लगाउनुपर्ने हो । उल्टो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खनेको समृद्धिको जग पुर्ने काम गरिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन धरापमा पर्दैछ । आगामी चैतमा निर्वाचन गर्ने भन्ने तर, त्यसका निम्ति आवश्यक कुनै तयारी नगर्ने अकर्मण्य सरकार जनताले भोग्नुपरेको छ । २०७४ माघ ७ अघि तीन तहका निर्वाचन हुन सकेनन् भने मुलुक गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्ने निश्चित छ । तर, चेत खुलेको छैन । राजनीतिक संवाद र सहमतिबाट सहकार्य गर्नेतर्फ सत्तासिन दलहरूको पटक्कै ध्यान छैन, रुचि छैन । यसकारण पनि जनता निराश छन् ।
विगतमा जस्तै यसपटक पनि परिवर्तनले जनताको समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंका बढेको छ । जनताको आर्थिक जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सक्दैन भने कुनै पनि व्यवस्था स्थायी हुन सक्दैन, चाहे त्यो गणतन्त्र नै किन नहोस् । सिंहदरबार र बालुवाटार अनि पुल्चोकका मन्त्री क्वार्टरमा त दसै“ आएकै होला, तर जनजनका संघारमा संकट भित्रि“दैछ । त्यसैले यस वर्षको बडा दसै“मा दूर्गा भवानीले सत्तासिन दलहरूलाई जनताका पीडा महसुस गर्न सक्ने, तिनका दर्द बुझ्न सक्ने ज्ञान दिउन् । राजनीतिक संकट टार्न सहकार्यका निम्ति प्रयत्न गर्ने, परिवर्तनलाई समृद्धिको सपनास“ग जोड्ने सद्बुद्धि दिउन् । दृष्टि परिवारको तर्फबाट पनि सबैलाई बडा दसै“को शुभकामना ।